Naqshaddii ugu dambeysay ee ZTE Axon 9 Pro horay ayaa loo muujiyay Androidsis
ZTE Axon 9 Pro naqshaddii ugu dambeysay ayaa shaaca laga qaaday
Eder Ferreño | | Noticias, ZTE
Maalmo ka hor ayaa la xaqiijiyay in ZTE uu joogi doono IFA 2018. Calaamadda Shiinaha ayaa soo bandhigeysa taleefankeeda cusub, Axon 9 munaasabadda ka socota Berlin. In kasta oo qaabkani aanu ahayn kan keliya ee aan ka helno qaddarkan, tan iyo markii nooc cusub lagu dhawaaqay. Tani waa Axon 9 Pro, oo sidoo kale la filayo in la soo bandhigo dhamaadka bishan Ogosto.
Naqshad cusub, oo shirkaddu horey u diiwaangelisay bilo ka hor. Hadda, horay ayaan u dhexeynay naqshaddii ugu dambeysay ee ZTE Axon 9 Pro. Waad ku mahadsantahay sawiradan waxaan arki karnaa waxa qaabkani noo diyaariyey.
Waxaan arki karnaa in astaanta ay doorteen taleefan leh darajo, sida caadiga ah noocyada Shiinaha. Waxaan hor taaganahay darajo weyn, taas oo si muuqata u maamusha shaashadda Qalabka. Naqshad qayb ahaan dhiirrigelisay iPhone X.
Dhabarka dambe ee barnaamijkan 'ZTE Axon 9 Pro' waxaan ka helaynaa kamarad laba-lab ah, oo si qumman loo dhigay. Kaamirooyinka hoostooda waxaan ka heleynaa iftiinka LED-ka. Intaas waxaa sii dheer, dareeraha faraha aaladda ayaa sidoo kale nagu sugaya dhabarka. Caadi ahaan naqshad aan wax badan ka aragno suuqa.
Ku saabsan faahfaahinta, weli waxba lagama oga aaladan. Muddo bilooyin ah ayaa laga joogaa markii ay shirkaddu diiwaangelisay tan ZTE Axon 9 Pro, laakiin hadda wax faahfaahin ah kama aysan helin arrintaas. Marka waxay umuuqataa inaan sugi doono inta laga soo bandhigaayo si aan xog u helno.
Qaybta wanaagsan ayaa ah inaadan sugin waqti dheer ilaa ZTE Axon 9 Pro uu imanayo, sida lafilayo la soo bandhigi doono dabayaaqada bishan. Marka usbuuca soo socda waa inuu rasmi noqdaa. Waxaan sugeynaa xoogaa xaqiijin ah shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 9 Pro naqshaddii ugu dambeysay ayaa shaaca laga qaaday
Xiaomi waxay iibisay 32 milyan oo telefoon rubucii labaad
Ogeysiiska rasmiga ah ee ugu horeeya ee Vivo X23 waa kan